Folo taona taorian’ny tsy fahombiazan’ny”Lohataona” Bahrain, mijaly ireo gadra politika · Global Voices teny Malagasy
Mampidi-doza ireo gadra ny fonja hipoka sy ny tsi-fahampian'ny fitsaboana
Voadika ny 13 Avrily 2021 4:43 GMT
Pikantsary avy amin'ity sioka mampiseho fihetsiketsehana ao Bahrain ity izay mitaky famotsorana ireo gadra.
Folo taona hetsi-panoherana naka aingam-panahy Lohataona Arabo nipoaka tao Bahrain saingy tsy nahavita nitondra fiovana tsara, mbola mijaly ireo voafonja ara-politika noho ny fiharatsian'ny fepetra any am-ponja sy ny fiparitahan'ny COVID-19 eo amin'ireo voafonja.
Tamin'ny 8 aprily tao amin'ny Twitter, mpikatroka Bahrainita malaza Maryam Al-Khawaja nitantara ny antsipiriany nahatsiravina tamin'ny fisamborana ny rainy, mpitarika mpanohitra malaza Abdulhadi Al-Khawaja, folo taona katroka lasa izay. Mbola any am-ponja izy hatramin'izao.
Amin'ny 2 maraina any #Bahrain:
TONGA FOTSINY! Nentin'izy ireo ny raiko, mbola eo amin'ny tohatra ny ràn'ny dadako! Tena nokapohin'izy ireo mafy ny raiko! Nokapohin'izy ireo izy ary tsy afa-niaina
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay, nanao fihetsiketsehana am-pilaminana nanerana ity fanjakana bitika ity ny fianakavian'ireo gadra, miantso ny manampahefana Bahrainita mba hampihena ny olona ao amin'ny fonja manoloana ny aretina COVID-19 mielipatrana ao amin'ireo toerana ireo.
Nitombo ny fihetsiketsehana tany #Bahrain manoloana ny valan'aretina #COVID19 tao amin'ny fonjan'i Jaw, izay ahitana gadra politika an-jatony. Nisy ireo fihetsiketsehana marobe notaterina tamin'ny herinandro mihoatra ny herinandro hafa tao anatin'ny herintaona mahery, araka ny angon-drakitra @ACLEDINFO
Nijoro ireo vehivavy havan'ireo gadra politika, nitaky ny famotsorana ireo havany, izay efa nigadra nandritra ny folo taona ny sasany.
Mampahery tokoa ny mahita reny, rahavavy, zanakavavy, vady ary koa renibe Bahrainita mitarika ireo fihetsiketsehana milamina ireo ankehitriny. Manana feo mitarika hatrany ny vehivavy Bahrainita ary mbola manana feo mahery amin'ny fitakiana ny fahamarinana sy ny zon'olombelona ao #Bahrain.
Nahazo vahana ny fihetsiketsehana taorian'ny vaovao nilaza fa nahitana fitomboana mararin'ny aretina COVID-19 ny fonja feno gadra ao Bahrain.
Misy hetsi-panoherana vaovao miainga any #Bahrain, mifototra manodidina ny fiparitahan'ny Covid ao amin'ny fonjan'i Jau. Nidina an-dalambe ny fianakavian'ireo voafonja haneho ny hatezerany. Fotoana mety izao hamotsaran'ny governemanta ireo gadra avy ao amin'ny fonja feno olona tsy azo antoka
Nanampy trotraka ny fihetsiketsehana ny fahafatesan'ilay mpikatroka iray nogadraina, maty noho ny tsi-firaharahiana ara-pahasalamana:
#Bahrain : Fandevenana ilay mpikatroka Abbas Malallah izay maty tany am-ponja – ampangain'ny mpanohana azy fa noho ny tsy fitandremana ara-pahasalamana – vao mainka niteraka hetsi-panoherana vao haingana mitaky ny famotsorana ireo gadra noho ny #COVID19 ny fahafatesany
Nilaza tamin'ny fanambarana ny Ivon-toerana Bahrain ho an'ny Zo sy ny Demaokrasia (BIRD-ang) any Londra tamin'ny 28 Marsa, izay nitatitra momba ny fiparitahan'ny aretina COVID-19 ao amin'ny fonjan'i Bahrain fa ny vaovao naparitaky ny fianakavian'ireo voafonja tao amin'ny WhatsApp dia nilaza fa farafaharatsiny olona 55 avy ao amin'ny tranobe miisa 21 ao amin'ny Fonjan'i Jau no voaporofo fa tratran'ny COVID-19. Afaka nanamarina ny 30 tamin'ireo tranga ireo hatreto ny BIRD.
Ao anatin'ny valan'aretina goavana COVID-19 ao amin'ny fonjan'i Jaw any Bahrain, tsy nahavita nandray fepetra fiarovana ampy ny manam-pahefana, tsy nizara aro-vava na fanadiovan-tanana na nanolotra fitsapana matetika ho an'ireo gadra, ka manitsakitsaka ny zon'izy ireo hanana fahasalamana
Hitan'i Bahrain fa niharatsy laharana izy amin'ny zon'olombelona satria sazin'ny fitondrana ireo mpiaro ny demaokrasia sy ny mpanohitra, nanagadra azy ireo any am-ponja feno olona, ​​nanafoana ny zom-pirenenan'izy ireo, nandràra azy ireo tsy handray anjara ara-politika, ary nanidy ny sehatra misy azy ireo.
Vao tsy ela akory izay, sy ho fanoherana ny fihanaky ny areti-mandringana, mitombo hatrany ao amin'ny fanjakana Bahrainita ny tsindry iraisam-pirenena ho fanatsarana ny toerana momba ny zon'olombelona sy ho famotsorana ireo gadra politika, izay efa nigadra nandritra ny folo taona mahery ny sasany tamin'izy ireo .
Androany aho dia mangataka amin'ny manampahefana ao #Bahrain mba hamotsotra ilay mpiaro ny zon'olombelona Abdulhadi Al Khawaja any am-ponja alohan'ny tsingerin-taona faha-60 taonany amin'ny herinandro ambony. Nigadra nandritra ny 10 taona izy
Tamin'ny volana lasa, mpikambana 14 ao amin'ny Parlemanta Britanika no nitsikera ny governemantan'izy ireo noho ny fanohizany ny fanohanana ny fitondrana Bahrainita ary nanentana ny minisitry ny raharaham-bahiny Dominic Raab mba hanao tsindry an'i Manama hamotsotra ireo gadra politika notazonina nandritra ny folo taona.
Nandray fanapahan-kevitra ihany koa ny Parlemanta Eoropeana tamin'ny volana marsa nitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro sy fepetra an'i Abdulhadi Al-Khawaja, sy “ireo rehetra nigadra noho ny fampiharana am-pilaminana ny zon'izy ireo maneho hevitra, mivory am-pilaminana ary miditra mpikambana amina fikambanana.”
Tao anatin'ny toa valin'ity tsindry ity, ny 2 aprily, raha ny filazan'ny masoivohom-baovao ofisialy, nahita ny manampahefana Bahrainita fa gadra 126 no afaka mahazo tombony amin'ny Dingan-dalàna sy Solom-panasaziana solony. Nanonona ny Lehiben'ny mpisolovava Chancellor Wael Boallay, nilaza ny tatitra fa tafakatra 3224 ny isan'ireo voaheloka hisitraka ny lalàna.
Manome safidy hafa amin'ny faharetan'ny sazy an-tranomaizina toy ny fanaraha-maso elektronika, ny famerana ny baiko ary ny fandraràna ny voaheloka tsy hiditra amin'ny toerana manokana ny lalàna, izay nolaniana tamin'ny taona 2018.
Tamin'ny tatitra tamin'ny volana Janoary, nilaza ny Human Rights Watch fa “tena mampatahotra tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana tsy azo antoka ao amin'ireo fonja be olona ao Bahrain”, ary nampiany koa fa tsy mahazo fitsaboana sahaza ireo gadra. Nanamarika ihany koa ny orina mpanaramaso fa ireo gadra 1 486 navoakan'ny governemantan'i Bahrain tamin'ny volana martsa 2020 noho ny areti-mandringana dia tsy nahitana mpitarika mpanohitra, mpikatroka, mpanao gazety ary mpiaro ny zon'olombelona, ​” izay maro amin'izy ireo no efa antitra sy/na mijaly noho ny aretina.”
Nitondra fahombiazana ho an'ny sasany ny fanerena anatiny sy manerantany.
Navoaka androany ilay gadra politika tranainy indrindra tany Bahrain, mpikatroka ny zon'olombelona Mohammed Hassan Jawad, rehefa nandany ny fiainany tany am-ponja nandritra ny 10 taona.
Vaovao mahafinaritra ho an'i Jawad sy ny fianakaviany (ary antenaina ho fambara fa hisy famotsorana bebe kokoa ho avy).
Ho an'ny sasany, toa an'i Abdulhadi Al-Khawaja, mitohy ny ady.
Mpikambana roa ao amin'ny Parlemanta Eoropeana, Maria Arena sy Hannah Neumann, namoaka fanambarana iombonana tamin'ny 8 aprily. Hoy ny vakin'ny fanambarana:
Satria miomana hankalaza ny volana masina Ramadany miaraka amin'ny ankohonany sy ny havany ny Silamo manerantany, dia afaka miantso ny manampahefana ao Bahrain isika mba hamindra fo amin'Atoa Al-Khawaja amin'ny famelana azy hiaraka amin'ny fianakaviany.